Oovimba bezinto eziphilayo- Ilungelo laseMelika lokwazi
Umyalezo ovela eMaine: Lixesha lokuba ujonge ngokuGcina
ezaposwa ngomhla Oktobha 8, 2019 by UCarey Gillam
Njengokuba ihlobo liphethuka ukuwa, imbonakalo yelizwe iMaine intle ukuyibona. Amahlathi aluhlaza alula ukuya kuthi ga ngakwiliso elinokubonwa kwilitye lamagqabi aluhlaza, omthubi kunye nobomvu krwe. Zonke iikhilomitha ezimbalwa ecaleni kwendlela emxinwa, koovimba beplanga ababuyiselweyo abadibana namakhaya afanelekileyo abekwe kwiihektare ezicocekileyo apho iintsapho zasefama zidibanisa ukutya emhlabeni kwaye zithande imfuyo.
Ndibe nethamsanqa lokundwendwela eli lizwe lomntla mpuma wefama kutshanje, ndichitha ixesha e “Umboniso Welizwe Oqhelekileyo” Kubunye, Maine. Bamalunga nama-2,000 57,000 kuphela abantu abahlala kwidolophana encinci, kodwa abantu abaqikelelwa kuma-XNUMX baxinene kwiindlela ezingoohola bodwa ukuze batyibilike kumsitho weentsuku ezintathu kulo nyaka uphele ngoSeptemba.
Umboniso olungileyo wawuyinxalenye yokubhiyozela kunye nenxalenye yemfundo-umnyhadala wolwazi lokuqala malunga nendlela yokuvelisa ukutya ngeendlela ezijolise ekuphuculeni, hayi ekungciphekeni, impilo yabantu kunye nokusingqongileyo. Abancinci nabadala bahlanganisene kwiitente ezinemibala emthubi namhlophe ukuba baxoxe ngezihloko ezinje ngokuthengiswa kweeblueberries zasendle, indlela yokuphuhlisa "ii-micro-dairies," kunye inzululwazi ebonisa Imihlaba esempilweni, engenamachiza inokwenza ngcono ikhabhon evela emoyeni njengesixhobo sokunciphisa imeko yemozulu.
Kumngcelele we-jangly obaleka phakathi kumabala endle, abantwana kunye nabantu abadala benxibe njengeenyosi, imifuno esandula ukwenziwa, ojongilanga kunye nemithi kwaye bephethe imiqondiso emibalabala efuna ukukhuselwa kwizisongelo ezibangelwa lolimo lwezemizi-mveliso. Omnye umntwana omncinci wayephethe uphawu olwalubhalwe “Andifafazi.”
Imiyalezo eqhutywa ngalo mngcelele nakwindawo ezinamabala alungileyo ithetha ukuba ecaleni kwalo mnyhadala wokutya kunye nokulima unyusa inkxalabo malunga nokungabikho kobunkokheli eWashington kunye nokunyusa umgangatho wokusetyenziswa okuvumayo kwezichumisi zokwenziwa kunye nezibulala-zinambuzane ekulimeni; ngokunjalo nendlela zokutyala izilwanyana zodwa eziye zangumhlaba ophambili kwezolimo e-US kwaye zisusa indalo ebalulekileyo.
Kule veki, iqela leenkokheli zikarhulumente lisike iribhoni kwiprojekthi ukunceda ukulungisa ezo nkxalabo ngokukhuthaza izisombululo ezizinzileyo eMaine abazimisele ukuba ngumzekelo kuluntu lonke ukuba lulandele.
The Maine Ukuvuna Federal Credit Union yavula iingcango zayo ngo-Okthobha 8 njengeziko lezemali eliphantsi kwelungu lase-US elijolise kuphela kwinkxaso mali kwiifama ezincinci kunye namashishini okutya abandakanyeka kwizenzo ezizinzileyo zezolimo. Umbutho wababolekisi ujonge ukubonelela ngemali kwimizamo ephucula ukufikelela kukutya okutsha, okulinywe kweli kwaye kukhusela indalo. Ngama-40 epesenti yeefama zikarhulumente ezingama-7,600 40 eziqhutywa ngamadoda nabafazi abangaphantsi kweminyaka engama-XNUMX, kukho umnqweno wezicwangciso eziqhubekayo zokuphucula iinkqubo zokuvelisa ukutya, abaxhasi bathi.
“Asizukuxhasa ngezolimo imveliso yorhwebo. Siququzelelwe ukuba sisebenze ngokubaluleka kwaye siphinde sibeke uqoqosho lokutya, ”utshilo uSam May. “Inkqubo yokutya yale mihla ayinayo yonke into. Ibulala iplanethi, umhlaba, impilo yethu kunye nokubeka impilo yethu emngciphekweni. Senza le siyenzayo eMaine kuba kufuneka yenziwe kwaye singayenza. ”
Abasunguli bemanyano yamatyala, ababengamagqala eWall Street, banyuse i-2.4 yezigidi zeedola kwimali eyinkunzi ebandakanya i-300,000 yeedola yolondolozo lwesibonelelo esivela kwiSebe lezoLimo laseMelika. Abasunguli bayifumene inkxaso yegqiza likarhulumente lase-US, kubandakanya ne-Republican yase-US uSusan Collins.
U-Meli wase-US u-Chellie Pingree, u-Democrat wase Maine, ugxininise imfuneko yokufumana olu hlobo lwenkxaso: Ndonwabe kakhulu ukubona lo manyano wokuqala kwilizwe ukuxhasa ngezidingo ezizodwa zeefama ezincinci kunye namashishini okutya. Ndiyathemba ukuba amanye amazwe azakuthathela ingqalelo kwaye ancede ukuvala umsantsa ophakathi kwamafama namaziko abo ezemali, utshilo kwingxelo.
Umsebenzi awuncomeli nje kodwa ungxamisekile. Ukongeza kwiingxelo zenzululwazi ezinxibelelanisa ezolimo zeshishini kunye neagrochemicals nongcoliseko lwamanzi, imihlaba engenazintsholongwane, izifo zabantu kunye neengxaki zokuzala, uphando olusandula ukukhutshwa lubonisa amakhonkco ongezelelweyo kukuhla okubukhali kwintaka ebalulekileyo kwaye izinambuzane.
Kodwa endaweni yokuthobela izilumkiso, uLawulo lukaTrump lubalekela ekubuyiseleni ukhuseleko kulawulo olukhawulezileyo.
Kubonakala kufanelekile ukuba ibilapha eMaine, ngaphezulu kweminyaka engama-50 eyadlulayo, apho umbhali uRachel Carson igcinwe indlu encinci kwaye ngamanye amaxesha ibuyela umva njengoko ibhala malunga neziphumo ezibi zehlabathi ezingene kwimichiza, ilizwe apho indalo ibingelelwa khona, kunye nezandi zeentaka zengoma zithe cwaka.
Ukutyelela ulungelelwaniso lwelizwe ekwindla eMaine kukubona oko kudala kubiza inyathelo elivela eCarson. Aba ngabantu abayiqondayo into yokuba kufuneka bakhusele kwaye bakhele kwiinkqubo ezizinzisayo nezondlayo, hayi iinkqubo ezichithayo. Aba ngabantu abanethemba lokuba abantwana babo kunye nabazukulwana baya kuhlala bekwazi ukubona indawo enamahlathi aluhlaza kunye neefama ezityebileyo kude kube ngamehlo.
Sisifundo esifunwa lilizwe lonke. Akukho xesha lokuchitha.
Ukutya kwengqondo, Pesticides ulimo, UChellie Pingree, Umgangatho oqhelekileyo weLizwe, enobulungisa, zolimo, imali, ukutya, impilo, Maine, Maine Ukuvuna Federal Credit Union, Maine Organic, eziphilayo, inambuzane, ipolitiki, Ukuhlaziywa ngokutsha, ezizinzileyo
Ukuguqula ukutya esikutyayo ngeDowDuPont
ezaposwa ngomhla Februwari 13, 2018 by UStacy Malkan
Uhlaziyo 2 / 26 / 18: Kwi-spinoff elandela ukudibana ne-Dow, uPioneer waseDuPont uzakutshintsha igama lakhe libe yiCorteva Agriscience; ngokusekwe kwindibaniselwano yamagama athetha "intliziyo" kunye "nendalo." Nantsi into esiyithathayo.
Ezona zinambuzane zibulala zinambuzane kunye nembewu zifuna ukuba ukholelwe ukuba zikwicala lesayensi. Ukutya okuphezulu kwezobuchwephesha likamva, bathi, kwaye abantu abaphakamisa inkxalabo malunga nemichiza yokubulala izitshabalalisi kunye nembewu yobunjineli yemfuza "bayayichasa inzululwazi."
Imagazini iAtlantic iya kubonelela ngeqonga kulawo manqaku athetha ngokushintshisana ngemali ezinkozo ngomhla kaFebruwari 15 isiganeko esihloko sithi, "Ukuvuna: Ukuguqula ukutya esikutyayo" kuxhaswe yiDowDuPont.
I-ajenda enefluff ine “abalimi, ii-foodies, iiteki kunye neetinkers” ezixoxa ngendlela iitekhnoloji zokutya zakutshanje eziguqula ngayo indlela yokulima izityalo kunye nezilwanyana, kunye nefuthe lekamva lokutya.
Ngaba nabaphi na abathathi-nxaxheba baya kubuza ukuba kutheni iDowDuPont iyaqhubeka nokutyhala iyeza lokubulala izitshabalalisi eliyingozi nangona lomelele ubungqina besayensi ukuba yenzakalisa ubuchopho babantwana?
Ngaba nawuphi na kubo uya kubuza ukuba kutheni iDuPont zigubungele imingcipheko yezempilo of Imichiza yeTefon inxulunyaniswe neziphene zokuzalwa, njengoko ivumela ikhemikhali ukuba ingcolise iindlela zamanzi kwihlabathi liphela?
Ngaba baya kubuza ukuba kutheni-ngaphandle kwerekhodi yenzuzo- iDowDupont inayo wala ukunceda amaxhoba entlekele okanye nokucoca ungcoliseko lwekhemikhali olubangelwe yingozi yesityalo sokubulala izitshabalalisi ngo-1984 Bhopal?
Ngaba iAtlantic ingabamba umsitho "oguqula imozulu" nge-ExxonMobil?
Yintoni elandelayo? Ngaba iAtlantic iyavuma ukusingatha umsitho "wokuguqula impilo" oxhaswe nguPhillip Morris okanye umcimbi "oguqula imozulu" oxhaswe yi-ExxonMobil?
Ingayiyo. Ngo-2015, iAtlantic Ingqungquthela yokutya ibhalwe ngu-Elanco, icandelo lika-Eli Lilly elenza i-ractopamine, ikhemikhali ekhuthaza ukukhula esetyenziswa kwimveliso yenyama kuvaliwe kumazwe ayi-100 ngenxa yenkxalabo yezempilo, kodwa isasetyenziswa apha.
NjengoTom Philpott ixelwe kuMama uJones, UMongameli wase-Elanco uJeff Simmons wenza intetho exhaswa ngulo msitho, apho “ekhalaze ngelithi iqela alibize 'i-fringe 1 pesenti,' elikhuthaza ukwandiswa kwemithetho ngabavelisi benyama, liqhuba ingxoxo yelizwe malunga nokutya.”
IiSimon Intetho yemizuzu eli-15 ibonise ividiyo evuselelayo yomama owayeye kwinkqubo ye-Elanco / American Academy of Nutrition and Dietetics kwaye wafunda malunga "nokubaluleka kweprotein" kunye nokutya inyama eninzi njengendlela yokuphucula impilo yosapho.
Ukuthenga iNgcaciso yokutya
IAtlantic igubungele ixesha elidlulileyo le-Dow / Union Carbide kodwa ngoku ibonelela ngesigqubuthelo se-DowDuPont's PR kwixa elizayo.
Ngemodeli yentlanganiso yokuqesha ukutya, iAtlantic inceda amaqumrhu abumba indlela esicinga ngayo ngenkqubo yethu yokutya. Oko akuhambelani nesibophelelo seAtlantic sokukhangela "inyaniso."
Zonke iimveliso zithatha inxaxheba kule veki yomnyhadala “wokuTshintsha ukuTya” - iTanki lokutya, iLake O'Lakes kunye neNew Harvest, nazo-zinika ikhava yeDowDuPont ukuba bazibonakalise njengeentshatsheli zesayensi ngelixa besenza ingxoxo-mpikiswano malunga nokutya malunga neetekhnoloji abazithengisayo.
Kodwa iinyani zembali zibalulekile kuyo nayiphi na ingxoxo ethembekileyo ngekamva, kwaye iDowDuPont ayiyontshatsheli kwezenzululwazi.
Zombini iDow kunye neDupont zineembali ezinde ze ukugubungela inzululwazi, Ukucinezela inzululwazi, bethengisa besazi iimveliso eziyingozi, ukugubungela iinkxalabo zempilo, ukusilela ukucoca messes zabo, kunye nokuzibandakanya amanye amanyundululu, ulwaphulo-mthetho kunye nokungalungisi -Nantoni na eyenziweyo ukukhusela umgca osezantsi.
Ukukhusela imijelo yenzuzo ethembekileyo, endaweni yokwenza izinto ezilungileyo ezenzelwe abantu kunye nokusingqongileyo, kuya kukhuthaza ezi nkampani kwikamva.
Ingeniso yeTreadmill yeNzuzo ye-Pesticide
Ukuqonda indlela iDowDuPont kunye nezinye I-pesticide / imbewu mega-ukudibana zinokuba nefuthe kwikamva lenkqubo yethu yokutya, jonga kwindlela ezi nkampani ezihambisa ngayo ubuchwepheshe bokutya obunelungelo ngoku.
Uninzi lokutya kwe-GMO kwimarike Namhlanje zenzelwe ukusetyenziswa kwezibulali zinambuzane ezithile, ezikhokelele ukusetyenziswa okongezelelekileyo kwezi zinambuzane, ukwanda kokhula kuyanyangeka kwizibulala-zinambuzane, kunye nomzamo wobundlobongela wokuthengisa iyeza yokubulala izitshabalalisi ukulimaza umhlaba wefama ngaphesheya kweMidwest.
Ukuqonda ukuba yintoni ekufuneka itshintshiwe ukuze ube nokutya okunempilo, buza abalimi, hayi iDowDuPont. Buza abahlali ukuba ukulwela impilo yabo kunye zabo ilungelo lokwazi malunga nezibulala-zinambuzane abaziselayo nabaphefumlayo.
EHawaii kwaye Argentina, apho izityalo eziyinjini yemvelo zikhula ngamandla, oogqirha baphakamisa inkxalabo malunga nokunyuka kweziphene zokuzalwa kunye nezinye izifo abarhanela ukuba zinxulumene nezibulala-zinambuzane. E-Iowa, omnye umvelisi ophambili we-GMO, ubonelelo lwamanzi lungcoliswe yimichiza ebalekayo evela kumbona nakwiifama zezilwanyana.
Ixesha elizayo lokutya okuphezulu, phantsi kolawulo lweenkampani ezinje ngeDowDuPont kunye ne-Elanco, kulula ukuba uqikelele: ngaphezulu kwezinto esele zithengiswa ziinkampani-imbewu eninzi yenzelwe ukuba isinde kwimichiza yokubulala izitshabalalisi, izibulala-zinambuzane ezingakumbi, kunye nokutya izilwanyana ezilungiselelwe ukuba zikhule ngokukhawuleza kwaye ulunge ngcono kwiimeko ezixineneyo, kunye namayeza okunceda.
Amaqonga eendaba athengiweyo anje ngoAtlantic "ukutya okuguqukayo," kunye namanqaku kunye neengxoxo malunga "nekamva lokutya" awayekulo uSyngenta ndibanjwe nje ukuthenga eLondon, kunye elinye ishishini lokufihla i-PR Iiprojekthi zokuyila kwakhona ingxoxo ye-GMO, ziinzame zokuphazamisa iinyani zembali kunye nenyaniso emhlabeni.
Abathengi abayithengi i-spin. Ibango lokutya okuphilayo iyaqhubeka ukunyuka ngaphesheya lonke uluntu Yoluntu lwaseMelika.
Ukutshintsha ukuthanda abathengi ukuncipha kweenkampani ezinkulu zokutya njenge-icebergs kwaye Ukwahlukana ushishino lokutya luphembelela ukuba “amawaka eminyaka oomama bafune iimveliso ezisempilweni neziselubala.”
Masibanike into abayifunayo: inkqubo yokutya esempilweni yabantu, amafama, umhlaba kunye neenyosi-inkqubo yokutya ebeka phambili ukukhusela iingqondo zabantwana bethu ngaphezulu kwenzuzo yeshishini lokubulala izitshabalalisi.
Leyo yingxoxo ekufuneka siyenzile malunga nokuguqula ukutya esikutyayo.
Ileta eya kwiAtlantic isuka ku-Anne Frederick umlawuli we Umdibaniso weHawaii weQonga eliQhubekayo: "Uluntu lwethu luye lwazama kaninzi ukumisela imigaqo yengqiqo kwinqanaba laseburhulumenteni nakwilizwe, kodwa laphazanyiswa yiDowDuPont kunye nomzi mveliso wezolimo ... Njengomfundi wopapasho lwakho, ayothusi into yokufumanisa ukuba iAtlantic iyakulungelelanisa uphawu lwayo kunye ishishini elibeke emngciphekweni ngokungakhathali impilo nezokhuseleko loluntu lwethu. Ndiyathemba ukuba niyakuyithathela ingqalelo inkxaso-mali yeDowDuPont, kwaye nime kubumbano noluntu lwethu oluhlala ngaphambili kule nkohlakalo. ”
Ngaba ufuna ukwazi iimfihlelo ezingaphezulu zokutya kunye neenkampani zeekhemikhali ezifihlakeleyo malunga nokutya kwethu? Bhalisela i-US ilungelo lokwazi Incwadana yeendaba apha, kwaye unako nikela apha ukugcina uphando lwethu lupheka.
Ukutya kwengqondo, Pesticides I-Academy yeSondlo kunye neDietetics, Argentina, ICorteva Agriscience, mthetho, DowDuPont, UDupont Pioneer, Elanco, Eli Lilly, mafama, Itanki yokutya, GMO, Hawaii, impilo, Iowa, UJeff Simmons, Umhlaba O'Lakes, eendaba, Isivuno esitsha, eziphilayo, inambuzane, ISyngenta, Teflon, the Atlantic
Intlanganisela yoRhwebo lweOrganic kwiDC njengeeMfazwe eziBhuqwayo ngaphezulu kweMigangatho
ezaposwa ngomhla Ngamana 25, 2016 by UCarey Gillam
Eli nqaku ekuqaleni livele ngaphakathi IHotff Post.
Yiyo “IVeki yeOrganic” kwakhona eWashington, DC, kunye nababekho "kumsitho wokwenza umgaqo-nkqubo wokutyikitya" we-Organic Trade Association (i-OTA) kuninzi abanokubhiyozela. Kwiveki ephelileyo, i-OTA, elona lizwi likhokelayo kushishino lwezinto eziphilayo, yabhengeza ukuba eli candelo lithumele eyona nzuzo inkulu eyakhe yafunyanwa ngonyaka kwi-2015, ngentengiso epheleleyo yezinto eziphilayo ikhula nge- $ 4.2 yezigidigidi, okanye iipesenti ezili-11, ukuya irekhodi le-43.3 yezigidigidi zeedola.
"Kukhuthazwe kukhetho lwabathengi, ikamva lezolimo ikamva," utshilo u-OTA kwingxelo ethetha ngenkomfa, eqhuba nge-23 kaMeyi-ngoMeyi 27.
Okwangoku, eli shishini liyavuma ukuba ikamva ligutyungelwe kukunqongophala konikezelo lonikezelo ebusweni bento i-OTA eyibiza ngokuba "yimfuno yabathengi ebonakala ingenakucimeka yezinto eziphilayo."
Unobhala wezoLimo uTom Vilsack kulindeleke ukuba athethe ne-OTA ngoLwesithathu, ukuxelela iinkokheli zezinto eziphilayo ukuba iSebe lezoLimo laseMelika lifuna ukwenza kube lula kumafama amatsha ukuba aqinisekiswe ngezinto eziphilayo kunye nokunceda icandelo lezinto eziphilayo ngengxaki yalo yemfuno.
Kodwa kwilizwe liphela, kwigumbi lenkundla e-California, iqela labathengi kunye namagqwetha okusingqongileyo kunye namaqela angenzi nzuzo aphakamisa iflegi ebomvu ebusweni be-USDA yokunyusa ukukhula kwecandelo lezinto eziphilayo. Iikona ziyasikwa, batyhola njalo. Imigangatho iyabethwa, kwaye abathengi bayatshintshwa kukutshintshwa kweNkqubo ye-Organic Organic ye-USDA.
Ukumanyelwa kwetyala kucwangciselwe uLwesine kwimeko enye engundoqo ukubandakanya imichiza eyenziweyo kumgquba kwimveliso ye-organic. Iziko lezeMpilo yokusiNgqongileyo, iZiko loKhuseleko loKutya kunye nangaphaya kwezibulala-zinambuzane laye lamangalela uVilsack kunye namanye amagosa ase-USDA kunyaka ophelileyo ngokukhupha uxwebhu olwalukhokele ngo-2010 “olutshintshe kakhulu iimfuno zendalo.” Ngaphantsi kwelungiselelo elitsha, abavelisi bezinto eziphilayo banokusebenzisa izinto zomgquba eziye zanyangwa ngamayeza okubulala izitshabalalisi athe athintelwa ekusetyenzisweni kwezinto eziphilayo.
Ngaphantsi kotshintsho olwenziwe yi-USDA, abavelisi bezinto eziphilayo banokusebenzisa izinto ezinje ngeengca zokucheba ezingcoliswe yimichiza yokubulala izitshabalalisi njengokondla umgquba kwizityalo zabo. Umgquba ongcoliswe sisibulali zinambuzane esaziwa ngokuba yi bifenthrin kunye nezinye izitshabalalisi zivumelekile, ityala lityhola ngelithi.
Oku kugxotha isibheno esingundoqo sendalo - umbono wokuba amayeza okubulala izitshabalalisi akanayo ndawo kwimveliso, amaqela aphikisana. Kwaye iarhente yaphule umthetho ngokusilela ukunika uluntu okanye ukuvumela uluntu ukuba luvakalise izimvo zalo njengoko besenza lo "mqobo", atsho amaqela.
"Abathengi be-Organic bayalahlekiswa, kwaye abasenakuthembela kwilebheli ye-organic ukuqinisekisa ukuba ukutya abakuthengayo kuveliswa ngaphandle kwamayeza okubulala izitshabalalisi kwezolimo," latsho ityala.
IZiko loKhuseleko loKutya kunye nabanye abamangali bazichaza ngokwabo kwinkundla yamatyala njengabasebenza ukukhusela indalo esingqongileyo kunye nempilo yoluntu kwaye basebenze njengabalindi kwintembeko yemveliso yezityalo. Bebelindele ukuba i-OTA ibuyise umnqweno wabo wokunyaniseka kwezinto eziphilayo, okanye ubuncinci bangazami ukungena endleleni yabo. Kodwa nge-2 kaMeyi, i-OTA yacela ukuba ithathe inxaxheba kule meko ingekhoyo kwicala labathengi kodwa ngokuchasene nabo.
Ekugcwaliseni kwayo, I-OTA, kunye ne-California Certified Organic Farmers (CCOF) ijoyine i-Western Growers Association (WG), emele amafama anoxanduva lokufumana phantse isinye kwisithathu semveliso yase-US ephikisayo, ukuphikisana namaqela akhusela abathengi malunga nomba womgquba. I-OTA kunye namanye amaqela oshishino baphikisa ngelithi, ukuba ulungiselelo lweUSDA oluvumela intsholongwane yokubulala izinambuzane ukuba luphoselwe ngaphandle yinkundla, izinto eziphilayo bezingayi "kuzinza."
Amaqela athi kwinkundla yokugcwalisa ukuba kuya kuba nohlalutyo kunye noqoqosho olungenakubonisa ukuba yonke icompost ayinasithako ngasinye semichiza esenziweyo esalelweyo kwimveliso yezityalo eziphilayo. Ukususwa ngesiquphe kokubonelela ngomgquba kungakhokelela kwizimangalo ezibiza kakhulu kwaye uninzi lweziqinisekiso zabalimi ziya kuba semngciphekweni ngqo. Ukungayeki “indlela yobuchule kunye noxanduva kumbandela ontsonkothileyo we-USDA” “kungayiphazamisa kakhulu,” utshilo amaqela ezinto eziphilayo.
Ummangali wabamangali ukuba amabango anje ngeziphumo eziphazamisayo "abomvu." Ukhukuliseko lwemigangatho yezinto eziphilayo kunokunceda ukwandisa imveliso kunye nokuhlangabezana neemfuno zabathengi, kodwa loo ndlela inokwenza ithambeka elimtyibilizi kunye nokupheliswa kokugqibela kwendalo. "La maxabiso okusingqongileyo, kwaye ngokukodwa angaxhasi ezolimo ezixhomekeke kwizibulali zinambuzane, ngoyena nobangela wesizathu sokuba abathengi bahlawule ipremiyamu yokuthenga ukutya okungaxutywanga," bagcwalisa njalo.
Ukuchotshelwa kwangoLwesine eSan Francisco kuya kuthatha izindululo zomnqamlezo ezilindelweyo zokugweba. Ngeli xesha sibuyele eWashington, i-OTA izakuphawula "Usuku lokukhuthaza," Ukuphuma ngeCapitol Hill ukudibana nabenzi bomthetho kunye nokunyanzela imigaqo-nkqubo exhasa ukukhula okuqhubekayo kwemveliso yezendalo.
Abathengi baya kuba benza kakuhle ukugcina iliso kuzo zombini.
UCarey Gillam uligqala kwintatheli yeReuters kwaye ngoku ungumlawuli wophando wase-US Right to Know, iqela lophando lokutya. Landela uCarey Gillam kwi-Twitter: www.twitter.com/careygillam
Ngaba ufuna ukutya okungakumbi kokucinga? Bhalisela i Incwadana yeendaba yeUSRTK.
Ukutya kwengqondo, Pesticides UCarey Gillam, ukutya, glyphosate, GMO, eziphilayo, miselo, UTom Vilsack, USDA, Inkqubo yeSizwe ye-Organic